1. Le ngcaciso imfutshane ithatha indawo yeNgcaciso eMfutshane yeCandelo loLawulo loVavanyo 0024/2009 engoLawulo lwezitenxo zovavanyo kwinqanaba lesithili.
2. NgokweMimiselo Regulations pertaining to the Conduct, Administration and Management of Assessment for the National Senior Certificate eyapapashwa kwiGazethi kaRhulumente 31337, eyafakelwa izilungiso nge-16 Meyi 2014, isithili ngasinye kulindeleke ukuba siseke iKomiti yeSithili yoKusingatha iZitenxo (District Assessment Irregularities Committee (DAIC)).
3. I-DAIC yikomiti ehlonyelwe kwiKomiti yePhondo yeZitenxo zoVavanyo (Provincial Examinations Irregularities Committee (PEIC)) esebenza phantsi kolawulo lwe-PEIC, ize inike ingxelo ngokuqhubekayo rhoqo, kwi-PEIC. I-PEIC iya kuhlanganisa ingcaciso evela kuzo zonke ii-DAICs yaye ingenise ingxelo yephondo kwiKomiti yePhondo yeZitenxo zeeMviwo kaZwelonke (National Examinations Irregularities Committee (NEIC)).
4. I-DAIC iya kujongana nazo zonke izitenxo zovavanyo kwinqanaba le-General Education and Training (GET), ele-Further Education and Training (FET) nele-Adult Basic Education and Training (ABET), yaye iya kudlala indima enkulu yokujongana nezitenxo ezimalunga neeMvavanyo zikaZwelonke, iimvavanyo zephondo neemvavanyo eziqhubekela ezikolweni (school-based assessments (SBA)).
5. Injongo yale ngcaciso imfutshane kukubonelela ngesikhokelo (Addendum A) esingeendlela zokulawulwa kwezitenxo zovavanyo kwinqanaba lesithili.
6. Apha kule ngcaciso imfutshane kukwaqhotyoshelwe nesiHlomelo B, esingumzobo (flow diagram) obonisa ukuba mazilawulwe njani na izitenxo zovavanyo yi-DAIC ngethuba lokubhalwa kweemviwo neemvavanyo.
7. Bayacelwa abalawuli bezithili ukuba bazise okukule ngcaciso imfutshane onke amagosa achaphazelekayo ukuze akuthathele ingqalelo.
"Government Gazette 31337" (ubukhulu: 6 241 KB)
IsiHlomelo A: Isikhokelo sokulawulwa kwezitenxo zovavanyo kwinqanaba lesithili (ubukhulu: 69 KB)
IsiHlomelo B: INKQUBO YOKULAWULA IZITENXO KWINQANABA LESITHILI (ISIKHOKELO SE-DAIC) (ubukhulu: 67 KB)
IsiHlomelo C: "WCED irregularity spreadsheet" (ubukhulu: 32 KB)
IsiHlomelo D: "Report on irregularities" (ubukhulu: 47 KB)